भरतपुर महानगरमा जोगाउलिन् त रेणुले शाख ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
भरतपुर महानगरमा जोगाउलिन् त रेणुले शाख ?
१९ बैशाख २०७९, सोमबार १८:४६
काठमाडौं – वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबैको चासोको विषय बनेको भरतपुर महानगरपालिकामा विभिन्न राजनैतिक दलहरुले चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीब्र पारेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिका विगतका चुनावी वर्षहरुबाटै चर्चाको विषय बन्दै आएको महानगरपालीका हो । नेपाली कांग्रेसको राम्रो पकड मानिएको महानगरपालीकाको रुपमा हेरिदै आएको भरतपुरमा नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनदेखि नै महानगरको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई सुम्पिदै आएको छ ।
तर आफ्नो पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको महागनरको नेतृत्व अर्कै दललाई दिने शीर्ष तहमा सहमति भएपछि भरतपुरका कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता नेतृवप्रति रुष्ट बनेका छन् । भरतपुरमा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीलाई सहयोग गरेको र यसपटक आफूहरुलाई माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्ने जिल्लाका कांग्रेसी नेताहरुले अडान राख्दै आएपनि चितवन कांग्रेसको निर्णयलाई लत्याउँदै केन्द्रले भरतपुरको नेतृत्व फेरी पनि माओवादी केन्द्रकै हातमा सुम्पेको छ ।
केन्द्रको उक्त निर्णय जिल्लाका केही नेताहरुले माने पनि भरतपुरका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले भने केन्द्रको निर्णय लत्याउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका हुन । उनको उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन कांग्रेसले सकेसम्मको शक्ति लाए पनि अहिले उनी निर्वाचन आयोगले दिएको भुईँकटर चुनाव चिह्न लिएर चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटेका छन ।
भरतपुर महानगरमा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेनु दाहाल र एमालेबाट विजय सुवेदी प्रतिस्पर्धामा छन । कांग्रेसको नेतृत्वप्रति रुष्ट हुँदै स्वतन्त्रबाट मेयरका लागि उम्मेद्वारी दिएका पौडेललाई भने पार्टीको साथ नभएकाले उनलाई जनमत तान्न सोचे जति सहज छैन । यद्ययी उनको उम्मेद्वारीले भरतपुरमा भने सत्ता गठबन्धनबाट मेयरका लागि उम्मेद्वारी दिएकी दाहाललाई धक्का लाग्न सक्के राजनीतिक वृतमा अनुमान गर्न थालिएको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा दाहाल कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धबाट विजयी भएकी हुन । सोही निर्वाचनमा उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई २ सय ३ मतान्तरले हराउँदै मेयरमा विजय भएकी थिइन ।
रेणु दाहालले अघिल्लो चुनावमा ४३ हजार १२७ मत ल्याउँदा एमालेका ज्ञवालीले ४२ हजार ९२४ मत ल्याएका थिए । तर अघिल्लो चुनावमा हार व्यहोरेको एमालेले यसपटक विजय सुवेदीलाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएसँगै गठबन्धनमा देखिएको बागी उम्मेद्वारले केही हर्षित भएको छ ।
भरतपुर महानगरमा अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यसपटक ३५ हजार ४७८ नयाँ मतदाता थपिएका छन् । सोही तथ्यांक अनुसार अहिले भरतपुरमा १ लाख ८५ हजार ७५२ मतदाता पुगेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ३७ हजार ३७७ मतदाताले मतदान नै गरेका थिएनन् । त्यतिबेला ७५ प्रतिशत मत खसेकाले त्यसैलाई आधार मान्दा यसपटक कम्तीमा १ लाख ४० हजार मत खस्ने आँकलन गरिएको छ ।